Twins ANC, Fresh´n Rebel dia mivoatra ny maodelin'ny fahombiazany | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | Nohavaozina amin'ny 10/06/2021 12:46 | General, hevitra
Miaraka amin'ny fanombohana ny Mpihira Clam Elite vaovao, Ny orinasa koa dia nanapa-kevitra ny hanome rivotra madio ny faritry ny kambana, ny headphone ANC namboarina miloko izay nahazo hevitra tsara. Ankehitriny dia hanana endri-javatra fanampiny izy ireo izay hahatonga ny fividiananao hanintona bebe kokoa sy hanafoana ny tabataba.
Nandinika lalina ny Twins ANC vaovao avy amin'ny Fresh´n Rebel izahay, headphones tsy misy tariby tena misy fanafoanana tabataba ary endrika mahaliana. Mijanona miaraka aminay ary hahitanao ireo zava-baovao natsangan'i Fresh´n Rebel ho an'ity maodely TWS ity izay efa fantatsika talohan'izay.
3 Fanafoanana ny tabataba sy fanaraha-maso feo
Amin'ity tranga ity dia nanapa-kevitra ny hifidy amin'ny loko marobe fanta-daza i Fresh´n Rebel, hanome azy ireo azy izahay tsirairay avy miaraka amin'ny anarany ara-barotra amin'ireto feony ireto: volamena, mavokely, maintso, mena, manga sy mainty. Amin'ity tranga ity, ny boaty dia nandalo fanavaozana lehibe, nanomboka tamin'ny naha-rafitra fanokafana ambonimbony ka lasa lasa "shell" style. Ny boaty dia manana refy somary voafintina miaraka amin'ny fiolahana lehibe ho fitahirizana mora foana. Ho an'ny ampahany, ao anatiny dia hanana mari-pamantarana LED momba ny toeran'ny headphones ary koa ny bokotra fampifanarahana.
Ny sofina an-tsofina dia in-sofina, tonika mahazatra ho an'ny headphone TWS rehefa manafoana ny tabataba izy ireo. Izy ireo dia manana endrika izay ho fantatsika, na dia tsy lava loatra aza, dia malalaka izy ireo. Mikasika ny fampiononana dia maivana izy ireo ary manana karazana pad, ka tsy hanana olana amin'ny fametrahana azy ireo isika. Ny lanjan'ny fitaovana dia 70 grama, na dia tsy haintsika samy hafa ny fandrefesana ny tranga famenoana sy ny lanjan'ireo fakan-tsarimihetsika. Na izany aza, tsy maintsy hamafisintsika fa manana fanoherana ny rano, hatsembohana ary vovoka isika miaraka amin'ny fanamarinana IP54, hahafahantsika mampiasa azy ireo hampiofana tsy misy olana.
Toy ny mahazatra, tsy fantatray ny tena dikan'ilay Bluetooth izay mitaingina fiara, na dia eo aza ny fiheverana ny hafainganam-pandeha sy ny fahaleovan-tena, ny zava-drehetra dia maneho fa nifidy ny Bluetooth 5.0 i Fresh'n Rebel. Manana sensor akaiky izahay izay hiato ny atiny multimedia rehefa esorinay tsy hohenoin'ny sofintsika izy ireo, dia hitranga ihany koa ny hamerenantsika azy ireo, ka hitohy hatrany ny feon-kira manomboka amin'ny toerana nisy azy. Inona koa, ny headphone dia Dual Master, izany hoe, azo ampiasaina mitokana izy ireo satria samy mifandray mivantana amin'ilay loharanom-peo.
Mikasika ny fizakan-tena dia tsy manana angon-drakitra momba ny fahaiza-manao amin'ny mAh izahay, saingy nahazo fahaleovan-tena nandritra ny 7 ora niaraka tamin'ny headphones izahay nandritra ny fotoana iray, lMampanantena eo anelanelan'ny 7 sy 9 ora ny marika miankina amin'ny maody fanafoanana ny tabataba izay navotsika, angona izay mifanaraka amin'ny fanadihadianay. Raha manisa ny fiampangana natolotry ny raharaha isika, dia maharitra 30 ora eo ho eo ny fahaleovan-tena raha tsy ampiantsika ny ANC, izay mety hidina hatramin'ny 25 ora raha ampodintsika io. Ho an'ny ampahany, ny fijanonan'ny boaty feno dia ho adiny roa, adiny iray sy sasany eo ho eo raha te-hofenoina tanteraka ny headphones.
Fanafoanana ny tabataba sy fanaraha-maso feo
Hisy hetsika fanafoanana ny tabataba rehefa ampavainay izy io, noho izany dia hikasika ny sofina an-tariby isika satria manana takelaka mikasika azy ireo. Ho fanampin'izany, afaka misafidy "Mode Ambient" izay hisambotra ampahany amin'ny tabataba amin'ny alàlan'ny mikrô izahay mba hanolorana rafi-pitokana-monina tsy dia atahorana ho an'ny toe-javatra sasany.
Fanafoanana ny tabataba mahazatra: Hofoanany ny tabataba rehetra amin'ny fahaizany lehibe indrindra.
Ny fanafoanana ny tabataba dia ampy ho an'ny vidin'ny vidinay, Mazava ho azy fa somary lavitra ny mpisolo toerana toa ny AirPods Pro izy ireo, na izany aza, raha mbola mametraka tsara ny pads isika dia ho manintona ampy ny fanafoanana ny tabataba. Toa tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny bas sy ny afovoany amin'ny fitsapana ataontsika izany, na dia mijanona tsy mahita ny feo malefaka kokoa aza isika. Amin'ity fizarana ity dia tsy azontsika atao ny manaratsy azy raha mijery ny tsena sy ny vidiny natolotry ny mpisolo toerana hafa isika miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika azontsika atao.
Tsy hita intsony izay nisafidianan'i Fresh'n Rebel hampiditra ny Twins ANC ao anatin'ny rafitra fampitoviana manokana izay hitantsika ao amin'ny Clam Elite. Na izany aza, tonga tsara ny headphones hampitoviana azy ireo, na dia toy ny mahazatra aza amin'ity karazana vokatra ity, izy ireo dia zahana manokana hanolotra vokatra tsara kokoa amin'ny mozika ara-barotra ankehitriny. Manana fanatrehana bas tsara sy feo avo lenta faran'izay avo lenta izahay, zavatra mahatalanjona raha atambatra izany amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika.
Amin'ny haavon'ny fifandraisana dia tsy nametraka olana izy ireo, mifandray haingana sy somary mora, toy ny rehefa Dual Master Afaka nanararaotra izany izahay mba hihaona amina telefaona iray fotsiny amin'ny fotoana sasany. Izy ireo dia mifandray haingana amin'ny loharanom-peo amin'ny alàlan'ny fanapahany azy ireo sy hampiatoana ny mozika rehefa apetratsika amin'ny tranga izy ireo, amin'ity fizarana ity dia tsara kokoa ny traikefa. Amin'ny haavon'ny fakana ny feontsika amin'ny alàlan'ny mikrô dia efa ampy hiresahana izy ireo, na dia tsy io aza no teboka mahatalanjona indrindra, tsy manome traikefa azontsika jerena ho ratsy.
ary ny tena marina dia tsy avelan'izy ireo misy faritra misy tsiro ratsy ao am-bava manoloana izany. Ny tranga famandrihana dia mahazo aina, marobe ary mateza. Amin'ny lafiny iray, ny headphone dia an-tsofina, zavatra saika tsy maintsy atao amin'ny headphone ANC ary tafiditra ao anatin'ny masontsivana "normal". Tsy isalasalana fa tolotra vaovao sy manintona indray mandeha indray avy amin'ny marika tena mifantoka amin'ny tanora vahoaka izay mikendry ny hamorona traikefa boribory, tsy misy fihatsaram-belatsihy loatra fa mifanaraka amin'ny tena nampanantenainy.
ANC kambana ANC
Fanovana farany: 10 junio 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny kambana ANC, Fresh´n Rebel dia mivoatra ny maodelin'ny fahombiazany